တောင်ကုတ်မှာ နောက်ဆက်တွဲ ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေ
25 พ.ค. 2563 - 20:59 น.
ရဲတပ်ဖွဲ့ က ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၁၁ ရက်က အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ အမှုဖွင့် ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့နယ် စည်ပင်သာယာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇေယျကျော် ရဲ့ညီဖြစ်သူ မိုက်ကယ် (ခ) ဦးစည်သူကျော်ဇံကို မေလ ၂၅ ရက်နေ့ က ထပ်ပြီးဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ တောင်ကုတ်ဒေသခံတွေဆီကနေ သိရပါတယ်။
မေလ ၂၅ ရက်နေ့ဟာ တောင်ကုတ် စည်ပင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇေယျကျော်၊ ဦးစန်းငွေနဲ့ ဦးဝေသောင်းတို့သုံးဦးကို ပုဒ်မ ၅၀ (က) နဲ့ အမှုဖွင့်ရမန်ယူပြီး ရုံးချိန်းပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် တောင်ကုတ်တရားရုံးမှာ မိသားစုတွေလာရောက်စောင့်ဆိုင်းနေချိန် ၊မနက် ၁၁ နာရီကျော်လောက်မှာ သူ့ကို နေအိမ်ကနေ ရဲတပ်ဖွဲ့က လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ တောင်ကုတ်မြို့ခံ ဦးစိုးသီဟက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
တောင်ကုတ် စည်ပင် ဥက္ကဋ္ဌ ရဲ့ညီ ဦးစည်သူကျော်ဇံဟာ ဈေးရောင်းပြီး မြို့နယ်လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ တောင်ကုတ်မြို့အဝင် ကိုဗစ် ၁၉ စစ်ဆေးရေးဂိတ်အဖွဲ့မှာ လည်း ပါဝင်သူဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ဦးစည်သူကျော်ဇံကို ဖမ်းဆီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ တောင်ကုတ်မြို့မရဲစခန်းမှူးကို ဘီဘီစီက ဆက်သွယ်မေး မြန်းခဲ့ပေမယ့် ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ ပါဘူး။
"မနက် ၁၁ နာရီလောက်မှာ သူ့ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က လာခေါ်သွားတယ်လို့ သတင်းကြားတာပေါ့။ မြို့နယ်မှူးပါတယ်။ စခန်းမှူးပါတယ်။ ရပ်ကွက်လူကြီးတွေပါတယ်လို့ သိရတယ်။ သူ့ဖုန်းတွေကို သိမ်းဆည်းပြီးတော့ သူ့ကိုခေါ်သွားတာလို့ ကြားပါတယ်။ ညနေပိုင်းက ရဲစခန်းကိုသွားပြီးမေးကြည့်တော့ စခန်းမှူးက သူ့ကိုစစ်ဆေးနေတယ် ၃ နာရီလောက်မှာ ရမန်ယူလိုက်ပြီလို့ ပြောပါတယ်။ ဘယ်ပုဒ်မနဲ့ဆိုတာတော့ မသိခဲ့ရဘူး။"လို့တောင်ကုတ်မြို့ခံ ဦးစိုးသီဟက ပြောပါတယ်။
တောင်ကုတ် စည်ပင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇေယျကျော်၊ ဦးစန်းငွေနဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) ရဲ့ တောင်ကုတ်မြို့နယ် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝေသောင်းကတို့သုံးဦးစလုံးကို မေလ ၁၁ ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ တောင်ကုတ်မြို့နယ်တရားရုံမှာရုံးတင်ပြီး အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀ (က)နဲ့ အမှုဖွင့်ပြီး အဲ့ဒီကနေ ရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သူတို့ရဲ့မိသားစု ဝင်တွေက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
မေလ ၂၅ ရက် ဒီနေ့ဟာ ဦးဇေယျကျော်အပါအဝင် ၃ ဦးတို့ကို ရမန်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် မိသားစုဝင်တွေ တောင်ကုတ်တရားရုံးမှာ သွားရောက်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အချိန် ရုံးဝန်ထမ်းတစ်ဦးရောက်လာပြီး သူတို့သုံးဦးကို ပ-၁၆၉ နဲ့ အမှုကပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း နဲ့ ရန်ကုန်မှာ နောက်တစ်မှုနဲ့ ရမန်ထပ်ယူတယ်လို့ပြော ကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝေသောင်းရဲ့သား ဦးဖြိုးဝေလင်းက ပြောပါတယ်။
သူတို့သုံးဦးစလုံးဟာ မိသားစုတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိကြဘဲဖြစ်နေကြသလို ဘယ်နေရာမှာထားတယ်။ ဘယ်တရားရုံးမှာ ရုံးထုတ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိခွင့်ရချင်ပြီး အခုလိုသိခွင့်မရတဲ့အတွက် စိတ်ပူနေရတယ်လို့ ဦးဝေသောင်းရဲ့သားကပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ တောင်ကုတ်မှာ နောက်ဆက်တွဲ ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေ